Trisquel 7.0 uye OpenSuse 13.2. Ivo vaviri vakabuda muchoto. | Kubva kuLinux
Trisquel 7.0 uye OpenSuse 13.2. Ivo vaviri vakabuda muchoto.
diazepam | | Kugoverwa
Nhasi tine mapatya. Kune rimwe ruoko Trisquel, iyo 100% yemahara distro yakavakirwa paUbuntu inotangisa yayo vhezheni 7.0 LTS Belenos (yakavakirwa pa14.04. Iyi vhezheni inotsigirwa kusvika 2019 (ehe), inouya ne kernel-libre 3.13 (yakaderera latency nekumira), desktop inoenderana nekudonha kweGNOME 3.12, Abrowser 33 (kunyangwe GNU Icecat 31 iripowo) uye GNUelectrum (a bitcoin chikwama) pre-yakaiswa. Kune zvakare mini mini neLXDE uye itsva vhezheni inonzi Shuga TOAST, nenzvimbo yeSugar yevana kubva pamakore 0 kusvika gumi nemaviri ekuberekwa.
Kune rumwe rutivi zvinoenderana neakaunda victorhck, OpenSuse 13.2 inoshandisa Brtfs seyakagadzika faira sisitimu ye / midzi yekuparadzanisa uye XFS ye / imba, pane kuvandudzwa muYaST (kuyerera kuri nyore kwekuisa), inoshandisa kernel 3.16, KDE 4.14, GNOME 3.14 uye zvakare inosanganisira iyo MATE, Kujekeswa 19, Xfce uye LXDE desktops. Mazhinji ekuvandudza akange atove akaverengerwa mushanduro 12 yeSUS Linux Enterprise iyo yakanga yaburitswa mazuva mashoma apfuura.
Dhawunirodha Trisquel 7.0 Dhawunirodha Opensuse 13.2
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Trisquel 7.0 uye OpenSuse 13.2. Ivo vaviri vakabuda muchoto.
OpenSuse 13.2 inoshandisa Brtfs seyakagadzika faira sisitimu ye / midzi yekuparadzanisa uye XFS ye / kumba
ndizvo ozkan akadaro
Kupfuura izvozvo, ndinofunga ndichaedza ndega pano naFedora 21 kuti ndione kuti zvinofamba sei.
Pindura kuna Ozkar
"Zvevanhu" mutauro zvakanakira ese mafaera masisitimu pane akajairwa ext2 mu / uye ext4 mu / kumba? Nei maBrtf mu / uye XFS mu / kumba? Ndiri kuda kwazvo nezvazvo, kuziva kuti ndoshandisa zvakafanana muArchLinux mukumisikidza mune ramangwana.
BTRFS ine sarudzo dzisingaperi (Uye izvo zvainoshaya), kunyanya mapikicha anobatsira (Gadzira backups zviri nyore, chimwe chinhu chakafanana nezvinoitwa naMac neiyo TimeMachine).
XFS ndeye huru, hombe dhata mavhoriyamu, kupisa kuwedzera madhizaini matsva, kuwedzera zvikamu, uye zvimwe zvinhu zvakaoma senge RAIDs.
Mukuita kwemushandisi akajairika zvinonetsa kuona mutsauko, asi mune dzidziso BTRFS inoshanda zvirinani kune mafaera mamiriro apo iwe uine akawanda madiki mafaera, XFS inowedzera uye yakakura zvirinani.
Ndokusaka vachiti BTRFS ye / uye XFS ye / kumba.
Ini ndaimboshandisa BTRFS kare, asi nhasi ndine XFS yechinhu chose uye ini ndiri kupfuura mufaro.
Ndicho chikonzero ndati: Inonakidza .. nekuti ini ndinofanira kutsvaga uye kuverenga nezvayo hahaha
Pandinogadziridza mapakeji paNetbook yangu naDebian Wheezy, kana iwo matsva akakura, maitiro aya haatombokanganisike kana muhupenyu hwebhatiri kana mukuita kwemamwe mabasa, saka ndakafarira iyo faira system Uyezve, zvakandibatsira kuendesa mamwe mafaera kubva kuWindows partition yangu kune iyo partition yandakasarudza muDebian GNU / Linux.
Thanks @Vashandi! Iwe wajekesa kusahadzika kwangu. Ini ndinonyanya kushandisa ese mafaera masisitimu pane yangu inotevera yekuisa.
Hei Vashandi uye kana ndikafunga kushandisa XFS pamidzi yekuparadzanisa uye pamba, zvinondipa matambudziko here? Ndine zvakajairwa HDD disk
Sezvo isu tiri kutaura nezve mafaera masystem pano, ini ndiri kuyedza Funtoo neXFS ye /. Ini ndakasiya / imba isina kugadzikana ne ext4, nekuti kutsigira zvese kutamira kuXFS ibasa chairo, kunyanya nekuda kweinenge 250GB yandakabata (pane iwo 230 mimhanzi).
Unogona kufunga kutamira kune iyo faira sisitimu zvakare kana iwe ukawana backup nzvimbo, pasina kuisa njodzi kurasikirwa kwedata.
Inonakidza nezve OpenSUSE, sezvo paine zvakawanda zvekugamuchira maererano nefaira system.
Ndine urombo kana ini ndichitaipa kubva pa iPhone.
Pindura kuna Eliotime3000
Chaizvoizvo kune dzimwe nhau nhasi ... Mu taringa ini ndagadzira izvo zvinyorwa uye chimwe chazvo ndeye rakavhurikaSUSE Tumbleweed theme:
Ini handigadzire / imba yakaparadzaniswa chete / midzi yekuparadzanisa
Pane yangu SSD ndine KaOS uye Antergos vese muXFS mu / uye hapana dambudziko.
Ini ndaimboshandisa BTRFS zvisati zvaitika asi ikozvino ndanyatso kuchinjira kuXFS, muchokwadi yave nguva yakati rebei.
Ini ndinobvuma, ini ndinoshandisawo XFS ... Ndiyo yakanakisa nhasi.
XFS yakanaka kwazvo, ini kana kuruboshwe / muXFS neFuntoo.
Ini ndaizotamisa iyo / imba kuXFS futi (handisati ndamboimisa, ndinayo mu ext4), asi ini ndinofanira kuchengetedza zvese, uye ndinotya kurasikirwa nedata :)
Ini handizive, asi XFS inongopa yangu netbook hafu yeawa hupenyu hwakawanda kana uchishandisa Debian. Ini ndinongozvinamata.
Iwe unayo pane SSD?
Ndingadai ndakafunga kuti ingangove imwe nzira yakatenderedza nekuda kwekukwirisa kwe RAM kunwa iyo XFS, asi ndakanga ndisati ndamboteerera nezve kuita kwebhatiri kunoenderana nefaira system
Zvinotoshamisa ndezvokuti, pandinosiya bhuku rangu rembichana kwenguva yakareba, handioni kudonha kwakakosha pabhatiri repasirese, kana pakuvhura Iceweasel (kubva paPC yangu naDebian Wheezy) pamapeji asingashandisi Flash Player kana kuda zvakadaro yakawanda HTML5.
Nezve hard disk, haisi SSD, sezvo iri yakajairika uye yazvino HDD yandinayo mubookbook rangu, mukuwedzera ini ndaona kuvandudzwa kwekuita kana uchishandisa Iceweasel uye kuwedzera maererano nekutamisa mafaira makuru pakati pezvikamu kana pendrives.
Ndakafarira xfs performance-wise ne ssd disk, ndine chikamu neiyi faira system ye firmware inovaka uye inobhururuka.
Kuenda kure nemusoro wenyaya wefaira masystem, ndakazvipira kuti ndione kana zvaikwanisika kuisa Abrowser muAntergos. Neraki kwandiri zvinokwanisika (yaourt -S abrowser-bin). Iye zvino ndiri kuyedza uye inonzwa kunge mvura, ndinofunga ndichaishandisa kwechinguva 🙂
Panyaya yeYaST, yatove yakazara muna Ruby, sekutaura kwavakaita kubvira 13.1?
Uye pane HDD dhisiki iyo yatove yakati rebei palaptop, zvinokurudzirwa here kuenda ne brffs kana kuenderera neyekare uye inodikanwa ext4?
kubva pane zvandakaverenga. Ehe.
Alberto cardona akadaro
Ini ndaigona kunge ndakapetwa nekuda kwekutaura asi ………….
sezvavanoita kana zvese zviri zvemahara uye zvisingazive zvimwe zvinhu zvehardware yako senge redhiyo X network kadhi,
uye ruzivo rwekuisa "proprietary" software
Ndiri mucheche, ndine hurombo, asi kana iwe usiri kuda kupindura, ndinonzwisisa.Ndinongoda kurudziro.
Pindura kuna Alberto Cardona
Mubvunzo wako wakajairika, usazvidya moyo. Kana iwe uchida proprietary software (a bhurumu bhurumu, rakanyorwa mutyairi risina kuwanikwa kodhi kodhi) mhinduro iyo Trisquel inokurudzira ndeyekuti iwe usashandise uye, semuenzaniso, mune iyo kadhi yenetiweki, tenga usb wifi (inozivikanwa se dongle). Saka nenzira imwechete nezvose. Muchiitiko cheiyo vhidhiyo kadhi iwe unofanirwa kushandisa mahara madhiraivha. Izvo hazvitsigire kushandiswa kweStam, uye pandinoti hazvitsigire imhaka yekuti ini ndaona kuti vanhu vari mumaforamu vanokudzinga uye vokuudza kuti uchinje distro usati wasimudzira proprietary software. Zvakafanana neizvi, tora kana kusiya. Iyo sarudzo inogara iripo, dzimwe nguva haina kugadzikana uye dzimwe nguva haigone kutsungirira 🙂
Izvo zvinhu zvinoitika kana akanakisa madhiraivha anowanikwa kune mamwe Hardware ari echokwadi. Dzimwe nguva zvinonetsa, tichifunga nezveazvino Hardware iri kubuda mumacomputer, kuyedza kugoverwa kuri 100% yemahara, nekuti pachagara paine iyo software yekudyara, iyo freeware isingatenderi iwe kuti uve 100% yemahara.
Mune yangu nyaya, kana mutyairi weNouveau anga akanaka, ini ndaizofunga kuishandisa. Asi kwete 🙁
Ndatenda zvikuru nekupindura ..
Ndiri kuzotsvaga usb wifi (dongle), Trisquel iko kugovera kwandakafarira zvakanyanya, ndichaedza kugadzirisa iwo madimikira ndisingaise software yekudyira, uye ndinovimba kuzokwanisa kuwana imwe yeizvi nekukurumidza inobuda yeTrisquel kana Parabola iyo iri 100% yemahara …….
Distros 100% seTrisquel uye / kana Parabola GNU / Linux-Libre inoshanda zvakanyanya pane desktop PC uye / kana malaptop ane 100% Intel chipset (sezvo madhiraivha avo ari emahara).
OpenSuse yakanaka uye iri nyore kushandisa
Ini ndinovhotera kuiswa kweiyi huru Linux distro!